I-Telestream Showcases yakamuva yokuqanjwa kwemikhiqizo kanye nezinsizakalo kusuka ku-Ingest ukuya ekulethweni okuqinisekiswe ikhwalithi ku-NAB NY - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB Khombisa UKUPHILA
I-Insight TV inwebisa ukuhamba kwezinyawo eSwitzerland
Ikhaya » Izindaba » I-Telestream Showcases yakamuva Lineup yemikhiqizo kanye nezinsizakalo kusuka ku-Inched ukuya ekuhanjisweni okuqinisekiswe ikhwalithi ku-NAB NY
Nevada City, California, Okthoba 7th, 2019 - E-NAB Show NY (I-Booth N337), I-Telestream, umholi wembulunga yonke ku-orchestration ye-media-based media flowwork, ukusakazwa kwemidiya kanye nobuchwepheshe bokulethwa, uzobonisa uhlu lwakamuva lwemikhiqizo nezinsizakalo ezithinta zonke izici zokusaphazeka kwemidiya yedijithali kusuka kumalensi ekhamera kuya ezikrinini zababukeli.
Izinkampani zemithombo yezindaba ezintsha ezifana neNetflix, iGoogle ne-Amazon zishayela zamukelwe ngokushesha ubuchwepheshe be-4K / UHD njengendlela yabadali bokuqukethwe yokuzihlukanisa ngokunikeza umuzwa wokubuka ophakeme. Ukuletha okuqukethwe ku-4K / UHD nge-HDR kungenye yezinguquko ezinkulu kakhulu ekubukeni kwamavidiyo ngaphezulu kweminyaka eyishumi-futhi lolu shintsho ludinga amathuluzi amasha namasu amasha. Ushintsho oluya ku-4K luthinta wonke amaphuzu ngokuhamba kwevidiyo, futhi onjiniyela, abaqhubi, abahleli kanye nabasebenza ngemibala ngokufanayo kumele bazivumelanise namazinga amasha nokuvela okubonisa ukuthi okuqukethwe kudalwa futhi kuhanjiswa kanjani.
Ukuqinisekisa ikhwalithi ye-pristine kusuka ekuqaleni komkhiqizo obukhoma, ngesikhathi sokuhlela, ngokubheka ukuqapha kokuqiniseka ngesikhathi sokusakaza, I-PRISM isiteji sokuhlola nokuhlaziya senzelwe i-IP, i-SDI nokuhamba kwe-hybrid HD, I-4K, i-HDR ne-WCG (imibala ebanzi ye-gamut). I-PRISM yenzelwe ukwenza lula ukuxhumana phakathi kwe-IT ne-Ubunjiniyela ngama-graphs ajwayelekile futhi aqondakala kalula. Ifakwe ngezinto ezintsha ezinjengombala wamanga, amathuluzi wokulinganisa we-HDR, nokusekelwa kwamanethiwekhi we-25G, i-PRISM yindawo yokulinganisa ehlukile futhi efakazelwe ikusasa eyakhelwe ama-studio, amaloli wokusakaza angaphandle, amagumbi wokuhlela nokuningi.
Njengoba abezindaba bathunjiwe benza indlela yokuphinda bazalwe, I-Telestreamka- I-Vantage Media Processing Platform ifaka ukungenela okuzenzakalelayo, ukucutshungulwa kwemidiya nokuqanjwa kokusebenza kokuphrinta okuningana. I-Vantage isiza izinkampani zokuxhumana nezokuzijabulisa zanamuhla ekuhambiseni ukulungiswa kokuqukethwe nganoma isiphi isimo. Okokusebenza kokuposa, Umphathi Wezindaba weVantage inikeza i-UI elula yokuhlela okuhleliwe kwe-Mac ne-Windows ukuze udlulise amehlo, uhlole kuqala, umaka futhi uhambise imisebenzi ukuze icutshungulwe. I-Vantage inikeza nge-GPU eshesha kakhulu i-multcreen transcoding kanye nomhlangano wokuzenzakalelayo wokuqukethwe, sonke ngenkathi kusingathwa ifomethi ye-4K + yamuva, ye-HDR ne-Dolby Vision. Ukuletha amakhosi wokugcina ku-IMF nazo zonke izinhlobo ezihlukile zemithombo edingekayo ye-VOD nokulethwa kweqonga amaningi kwenza i-Vantage ibe yithuluzi elibaluleke kakhulu labadali nabanikazi bokuqukethwe. Kuya ngokuthi imidiya ihlala kuphi, i-Vantage ingacubungula ngokuzenzakalelayo efwini nge I-Vantage Cloud Port noma ezakhiweni, konke kususelwa emithethweni yebhizinisi yamakhasimende eyenzelwe ukulandela ukuhamba kwemali okungabizi kakhulu ngomsebenzi ngamunye.
Isiqinisekiso sekhwalithi yevidiyo:
Ukuhamba komsebenzi okuzenzakalelayo nakho kufinyelela kulawulo lekhwalithi nge I-Vidchecker futhi Aurora ukuhlinzeka nge-QC esekwe kwifayela nokulungiswa kokugcina noma yiziphi izindleko ezingaba khona ezihambisana nokwenqatshwa kanye nokuhlelwa kabusha. Njengenhloko yesiginali ye-OTT, i-Multiscreen, noma i-TV yomugqa wendabuko, I-Telestream iQ futhi Kuthunyelwe izixazululo ziqinisekisa isipiliyoni sevidiyo esingcono kakhulu nge-Hardware noma ama-probes enziwe ahlinzeka ngempendulo ephelele mayelana nekhwalithi nokutholakala kuyo yonke indawo kwibhokisi lokuhambisa.
“Ikhwalithi bekulokhu kuyinto ephambili kukho konke esikwenzayo I-Telestream, ”Kusho uScott Puopolo, oyi-CEO kwa I-Telestream. “Konke ukutshala imali esikwenzile kube wukuqinisekisa ukuthi amakhasimende ethu athola ikhwalithi ephezulu kakhulu kuzo zonke izigaba zabezindaba. Lesi ngesinye sezizathu eziyinhloko izinhlangano ezakha amapayipi wazo wokukhiqiza ngawo I-Telestream imikhiqizo engaphakathi.
Ukusakazwa Kwesehlakalo Esibukhoma Nemidlalo:
Njengoba amamodeli webhizinisi avela, enye yezinselelo ezinkulu yezinhlangano zemidiya namhlanje ukuletha imicimbi ephezulu kakhulu, engaphazanyiswa bukhoma kubabukeli i-OTT nasepulatifomu abalithandayo. I-Telestream ihola indlela ekusakazweni bukhoma nge I-OptiQ Monitor, uhlelo lwendabuko yamafu (futhi ikakhulukazi ifu le-agnostic) elinikeza ukuthunyelwa okungakaze kubonwe esikhathini sangempela kokuqapha bukhoma kwe-ABR ngezinga lokuthola izindawo zokuthola ukutholwa kwamafu kwe-282 ezindaweni eziphezulu ze-100. Besebenzisa le sethi yezinsizakalo zefu, abasebenzisi bangakwazi ukusakaza ngamandla amaphrojekthi wokuhlola ngokuhlaziywa kwevidiyo ye-QoE yesikhathi sangempela nokubuka okuphelele kokusebenza kwe-CDN network QoS performance. Imodeli yokukhokha njengoba usuhamba iya ngokuthi amakhasimende angakwazi ukukala imvelo yawo yokuhlola, futhi afune “ukushibilika” ukusakazwa kwenkinga ethile noma indawo yokutholakala ngamaphoyinti wokuqapha ukusheshe akhombe umthombo wenkinga, bese ehlisa isisulu lapho umsebenzi usuqedile-konke ngenkathi ukhokhela uhlelo kuphela isikhathi olusebenzayo. Isiteshi se-OptiQ inika amandla izinhlangano ukuthi zenze iziteshi ezintsha ze-OTT khona manjalo. Isiteshi se-OptiQ sibonisa ukuqalwa kohlelo bukhoma kusuka kungqalasizinda efakwe ngamafu futhi kufaka phakathi amandla, ukuqashwa kwamavidiyo ahlanganisiwe nokusebenza kokuqonda okuholela kwiziteshi ezizayo "zokuzilapha".
Ukukhiqizwa Kokubukhoma Okubukhoma:
Isizukulwane esilandelayo I-Wirecast Gear, I-TelestreamUhlelo lokukhiqiza ukusakazwa kwamavidiyo bukhoma lokuwina luzokhonjiswa ku- Banzi idokodo (N121). Izingxenyekazi zekhompiyutha ezintsha zeWirecast Gear zimele ukukhuphuka kokusebenza okukhulu uma kuqhathaniswa ne-hardware yesizukulwane esedlule. Ngama-cores amaningi we-CPU, isivinini sewashi eliphakeme, i-RAM esheshayo, kanye nesitoreji se-NVMe sakamuva, i-Wirecast Gear iyisistimu ye-Turnkey ephezulu kakhulu enikela ebangeni lentengo yayo.
I-2016 NAB Bonisa I-2016 NAB Bonisa i-Job Fair 2016 NAB Bonisa Izindaba I-Broadcast Beat Awards Sakaza i-Beat Magazine Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe Umsakazo Wesivumelwano Umhlangano Wokusakaza i-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa komsindo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, i-bitrate ukunciphisa, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw I-NAB 2015 I-NAB 2016 I-NAB Bonisa I-NAB Bonisa i-2016 imisebenzi ye-nab show I-NAB Bonisa Las Vegas I-NAB Bonisa Ukubhaliswa NAB16 nabshow I-National Association of Broadcast Show Show	2019-10-07
Ngaphambilini: Ama-GB Labs abasebenzisana ne-NCS Techno Systems ukukhipha i-Mosaic ne-CORE.4 Lite e-Broadcast India
Olandelayo: I-TSL Imikhiqizo Ekhombisa Ukuvuselelwa Kwezixazululo zayo ze-Audio Monitorin Solutions ne-Broadcast Control Systems e-NAB NY 2019
Isikhungo Sokusebenza Kwenethiwekhi (NOC) Injini
I-Freelance Web Designer
Ikhwalithi Yokuqinisekisa Ikhwalithi - Ukulethwa Kwevidiyo kwe-HLS
Injini Yokukhiqiza / I-IT Specialist - I-NBC Sports